Koonfurta Suudaan | KONGOLISOLO
Posted By: KongoLisolowaa: Juun 6, 2020 00: 00 No Comments
Quruxda Suudaan waa mid aad u qurux badan. Quruxda Suudaanku waa qurux aan xor ka ahayn wixii la isku qurxiyo. Quruxda Suudaan waa quruxda madow / Afrikaanka quruxdeeda oo dhan ...	Akhri wax dheeraad ah
Tan iyo markaas, reer Katangese waligood ma joojin kobcinta isbeddelada madax-bannaanida. Madaxbanaanida Katanga ee Kongo waa wadnaha dhamaan sheegashada Katangese ...	Akhri wax dheeraad ah
Laakiin, Suudaan waxay leedahay Pyramid ka badan Masar - runta dadka Madow / Afrikaanka waxay bilaabaysaa inay ka soo baxdo godkii ay Reer Galbeedka ku aaseen. C ...	Akhri wax dheeraad ah
Ka dib ugaarsiga reer Falastiin, Israa’iil waxay weerartaa dadka madow / Afrikaanka. Waxaa lagu magacaabaa "kuwa xadgudbay". Xerada Ketziot ee lamadegaanka waxaa ku jira qaxootiga 11 000. Darbiga nabadgelyada ...	Akhri wax dheeraad ah
Aug11 10: 44